अन्तर्वार्ता « Drishti News
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको गति बढाउन भन्दै गत मंसिर ४ गते मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरे । तर, उनको त्यो कदम आलोचनाबाट मुक्त रहन सकेन ।
नेपाली राजनीतिमा वामदेव गौतमलाई एक हक्की र निडर स्वभावका नेताका रुपमा लिइन्छ । आफ्ना कतिपय विचार र अडानका कारण उहाँको जीवनमा राजनीतिक उकालीओराली सामान्य साबित भइसकेका छन् । पार्टी एकता
मिशन जर्नालिज्म कहिले पनि असान्दर्भिक हुन सक्दैन- प्रदीप नेपाल
दृष्टि साप्ताहिक ३६ वर्ष पूरा गरी ३७ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । त्यसबेलाको मिसन पत्रकारिता र अहिलेको पत्रकारितालाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ? दृष्टि साप्ताहिककै कुरा गर्दा, यसका दुई विशेषता
झापा बिद्रोह’का चर्चित नेता हुन्, मोहनचन्द्र अधिकारी । ०२८ सालमा रौतहटको गौरबाट पक्राउ परेपछि उनी निरन्तर १७ वर्ष ९ महिना कष्टकर जेलजीवन बिताउन बाध्य भए । उनीसँगै आन्दोलनमा लागेका, जेलपरेका
विगत १५ वर्षदेखि विद्यार्थीहरुलाई अध्ययनको लागि अष्ट्रेलिया पठाउँदै आएको राजधानीको बागबजारमा अवस्थित इ प्लानेट (एजुकेशन प्लानेट) एजुकेशन कन्सल्टेन्सीेले प्रत्येक वर्ष दुईपटक वृहत एजुकेशन फेयर आयोजना गर्दै आएको छ । यसै
सबैभन्दा लामो संघर्षशील इतिहास बोकेको पार्टी हो, नेपाली कांग्रेस । सबैभन्दा लामो समय सरकारका बसेको पार्टी पनि हो, नेपाली कांग्रेस । अनेक आरोह–अवरोध झेलेको यो पार्टी गत निर्वाचनमा जनताको विश्वास
राजा महेन्द्रले सेनासँग सम्बन्ध बढाएर त्यसबेला पनि चीनसँग सम्बन्ध सुधारको प्रयास गरिबक्सेको थियो । तर, भौगोलिक अनुकुलता नहुँदा त्यो त्यति सम्भव भएन । लामो समयसम्म दुई छिमेकीबीचको सम्बन्धमा ब्यालेन्स
चीनका राष्ट्रपति सी चीन पिङ निकट भविष्यमै नेपालको भ्रमणमा आउनुहुने भएको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल चीन सम्बन्ध, बिआरआई र यसबाट नेपालले लिनसक्ने लाभ सम्बन्धमा नेपालका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेसँग राससकर्मी
हिमालयन बैंकका लागि गएको आर्थिक वर्ष कस्तो रह्यो ? अपेक्षा अनुसार नै भयो । बोर्डले जुन लक्ष्यहरु दिएको थियो त्यो सबै पूरा भयो । जुन ‘नन पर्फमिङ एसेट’ थियो, त्यसको